Mpanamboatra sy mpamatsy rafitra Warehouse Automated China | IVEN
AS / RS (Rafitra fanangonam-bokatra mandeha ho azy)
Rafitra fanatobiana mandeha ho azy
Famaritana ny rafitra:
Ny rafi-pitantanana trano fitehirizana (WMS) dia rindrambaiko sy fizotra ahafahan'ny fikambanana mifehy sy mitantana ny fivezivezena amin'ny trano fitehirizana manomboka amin'ny fotoana hidiran'ny entana na fitaovana amin'ny trano fitehirizana mandra-pivoak'izy ireo. Ny fiasa ao amin'ny trano fanatobiana entana dia misy ny fitantanana ny lisitra, ny fizotrany ary ny fanaraha-maso.
Ohatra, ny WMS dia afaka manome fahitana amin'ny lisitr'ireo fikambanana amin'ny fotoana sy toerana rehetra, na amin'ny toerana na amin'ny fitaterana. Izy io koa dia afaka mitantana ny asan'ny rojom-panomezana avy amin'ny mpanamboatra na mpivarotra ambongadiny mankany amin'ny trano fitehirizana, avy eo mankany amin'ny mpivarotra na foibe fizarana. Ny WMS dia matetika ampiasaina miaraka na ampiarahina amin'ny rafitra fitantanana fitaterana (TMS) na rafitra fitantanana ny tahiry.
-Na dia sarotra sy lafo aza ny WMS ampiharina sy ampiasaina, ny fikambanana dia mahazo tombony azo hanamarinana ny fahasarotana sy ny fandaniana.
-Ny fampiharana WMS dia afaka manampy ny fikambanana hampihena ny vidin'ny asa, hanatsara ny fahamarinan'ny lisitra, hanatsara ny fahafaha-misaina ary hamaly, hampihena ny lesoka amin'ny fakana entana sy fandefasana entana, ary hanatsara ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Ny rafi-pitantanana trano fitehirizam-bokatra maoderina dia miasa miaraka amin'ny angon-drakitra tena izy, mamela ny fikambanana hitantana ny fampahalalana farany indrindra momba ny hetsika toy ny baiko, ny fandefasana, ny tapakila ary ny fivezivezen'ny entana.
Previous: Vahaolana famonosana ambaratonga faharoa momba ny fanafody sy fanafody
Manaraka: Masinina fanasan-damba mamono syrup